ဆံပင်အတွက် ပန်းသီး -
ပန်းသီးဟာ သင်နဲ့ လက်တစ်ကမ်းမှာ ရာသီမရွေး ဝယ်ယူ ရရှိနိုင်တဲ့ သစ်သီးတစ်မျိုးပဲ မဟုတ်ပါလား။ ပန်းသီးရဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အကျိုးအာနိသင် များစွာ ရစေနိုင်တဲ့ အထဲက အခု ဖော်ပြပေးမှာကတော့ ပန်းသီးနဲ့ သင့်ဆံပင် ဆက်စပ်မှု အကျိုးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပန်းသီးဟာ ဆံပင်များကို သန်စွမ်းစေပါတယ်။ ပန်းသီးထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ ဘိုင်အိုတင်ဓာတ်ကြောင့် သင့်ဆံပင်ကို အားပြည့် နေစေမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆံပင်တင်မက ခြေသည်း လက်သည်းတွေရဲ့ ကျန်းမာမှုကိုလည်း ပေးပါတယ်။
ဆံပင်ကျွတ် သက်သာစေဖို့ကလည်း ဘိုင်အိုတင်ဟာ အသုံးဝင်ပါတယ်။ သုတေသီတို့ရဲ့ လေ့လာချက်အရ ဘိုင်အိုတင်ဟာ ဆံပင်ကို သန်စွမ်း စေပြီး ဆံသားများ တုတ်ခိုင်လာကာ
ဆံပင်ကို ထူထဲစေပါတယ်။ အများကြီးမဟုတ်ပါဘူး တစ်နေ့ကို ပန်းသီးတစ်လုံး စားပေးရုံနဲ့ သင့်ဆံသားတွေ ကောင်းမွန်စွာ သန်မာလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ဆံပင်တွေ အရှည်နှေးနေလို့ သိပ် စိတ်မပူပါနဲ့။ ပန်းသီးကိုသာ စားသုံးပါ။ ပန်းသီးထဲမှာ ပရိုဆိုင်နီဒင် B2 ပါဝင်တာမို့ ဆံပင်ထူပြီး အရှည် မြန်စေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဆံပင် ပါးခြင်း ထိပ်ပြောင်ခြင်း ကိုလည်း ကာကွယ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပန်းသီးထဲမှာ ဆံပင်မကျွတ်အောင် ကာကွယ်နိုင်တဲ့ ဓာတ်ပေါင်းတွေ ဖြစ်တဲ့ ပျော်ဝင်နိုင်စွမ်း များသော အမျှင်ဓာတ် ဖီနောလစ်ဒြပ်ပေါင်း အင်တီအောက်ဆီးဒင့်နဲ့ ဗီတာမင်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။
အင်တီအောက်ဆီးဒင့်ဟာ ဦးရေပြားရဲ့သွေးလည်ပတ်မှူကို ကောင်းစေတာကြောင့် ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပန်းသီးရဲ့ ကြိတ်ညှစ်ရည်ကို သင့်ဦးရေပြားမှာ လိမ်းပေးပါ။ ဦးရေပြားရဲ့ နဂိုသဘာဝ အစိုဓာတ်ကို ထိန်းပေးနိုင်တာမို့ ဗောက်ထခြင်း ကင်းဝေးစေပါတယ်။ ရှမ်ပူနဲ့ ခေါင်းလျှော် ပြီးတဲ့အခါ ပန်းသီးအရည်ကို ဦးရေပြားပေါ် လောင်းပြီး ညင်သာစွာ နှိပ်နယ်ပေးပါ။
ဆယ်မိနစ်ခန့် ထားပြီး ရေအေးနဲ့ သန့်စင် ပေးပါ။ ဗောက်ထခြင်း ကင်းဝေးစေရုံ သာမက ဆံသားများကိုပါ တောက်ပြောင် လာစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကဲမိတ်ဆွေတို့ရေ သက်သာလွယ်ကူပြီး အကျိုးများတဲ့ သဘာဝ အိမ်တွင်းနည်းကလေးကို အသုံးပြုပြီး ဆံပင်တွေကို ထိန်းသိမ်းလိုက်ပါစို့….
ပနျးသီးဟာ သငျနဲ့ လကျတဈကမျးမှာ ရာသီမရှေး ဝယျယူ ရရှိနိုငျတဲ့ သဈသီးတဈမြိုးပဲ မဟုတျပါလား။ ပနျးသီးရဲ့ ကနျြးမာရေးဆိုငျရာ အကြိုးအာနိသငျ မြားစှာ ရစနေိုငျတဲ့ အထဲက အခု ဖျောပွပေးမှာကတော့ ပနျးသီးနဲ့ သငျ့ဆံပငျ ဆကျစပျမှု အကြိုးတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။
ပနျးသီးဟာ ဆံပငျမြားကို သနျစှမျးစပေါတယျ။ ပနျးသီးထဲမှာ ပါဝငျတဲ့ ဘိုငျအိုတငျဓာတျကွောငျ့ သငျ့ဆံပငျကို အားပွညျ့ နစေမှောပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဆံပငျတငျမက ခွသေညျး လကျသညျးတှရေဲ့ ကနျြးမာမှုကိုလညျး ပေးပါတယျ။
ဆံပငျကြှတျ သကျသာစဖေို့ကလညျး ဘိုငျအိုတငျဟာ အသုံးဝငျပါတယျ။ သုတသေီတို့ရဲ့ လလေ့ာခကျြအရ ဘိုငျအိုတငျဟာ ဆံပငျကို သနျစှမျး စပွေီး ဆံသားမြား တုတျခိုငျလာကာ
ဆံပငျကို ထူထဲစပေါတယျ။ အမြားကွီးမဟုတျပါဘူး တဈနကေို့ ပနျးသီးတဈလုံး စားပေးရုံနဲ့ သငျ့ဆံသားတှေ ကောငျးမှနျစှာ သနျမာလာမှာ ဖွဈပါတယျ။
သငျ့ဆံပငျတှေ အရှညျနှေးနလေို့ သိပျ စိတျမပူပါနဲ့။ ပနျးသီးကိုသာ စားသုံးပါ။ ပနျးသီးထဲမှာ ပရိုဆိုငျနီဒငျ B2 ပါဝငျတာမို့ ဆံပငျထူပွီး အရှညျ မွနျစပေါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ဆံပငျ ပါးခွငျး ထိပျပွောငျခွငျး ကိုလညျး ကာကှယျပေးမှာ ဖွဈပါတယျ။
ပနျးသီးထဲမှာ ဆံပငျမကြှတျအောငျ ကာကှယျနိုငျတဲ့ ဓာတျပေါငျးတှေ ဖွဈတဲ့ ပြျောဝငျနိုငျစှမျး မြားသော အမြှငျဓာတျ ဖီနောလဈဒွပျပေါငျး အငျတီအောကျဆီးဒငျ့နဲ့ ဗီတာမငျတှေ ပါဝငျပါတယျ။
အငျတီအောကျဆီးဒငျ့ဟာ ဦးရပွေားရဲ့သှေးလညျပတျမှူကို ကောငျးစတောကွောငျ့ ဆံပငျကြှတျခွငျးကို ကာကှယျနိုငျတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ပနျးသီးရဲ့ ကွိတျညှဈရညျကို သငျ့ဦးရပွေားမှာ လိမျးပေးပါ။ ဦးရပွေားရဲ့ နဂိုသဘာဝ အစိုဓာတျကို ထိနျးပေးနိုငျတာမို့ ဗောကျထခွငျး ကငျးဝေးစပေါတယျ။ ရှမျပူနဲ့ ခေါငျးလြှျော ပွီးတဲ့အခါ ပနျးသီးအရညျကို ဦးရပွေားပျေါ လောငျးပွီး ညငျသာစှာ နှိပျနယျပေးပါ။
ဆယျမိနဈခနျ့ ထားပွီး ရအေေးနဲ့ သနျ့စငျ ပေးပါ။ ဗောကျထခွငျး ကငျးဝေးစရေုံ သာမက ဆံသားမြားကိုပါ တောကျပွောငျ လာစမှော ဖွဈပါတယျ။
ကဲမိတျဆှတေို့ရေ သကျသာလှယျကူပွီး အကြိုးမြားတဲ့ သဘာဝ အိမျတှငျးနညျးကလေးကို အသုံးပွုပွီး ဆံပငျတှကေို ထိနျးသိမျးလိုကျပါစို့….
တရုတ်ပြည်က ဆင်ဂဲလ်အမေတစ်ယောက် သမီးပေါ် စည်းကမ်း တင်းကျပ်လွန်းလို့ အသတ်ခံရ
လက်တင်အမေရိကားကို လော့ဒ်ဒေါင်း မဖြုတ်ဖို့ WHO သတိပေး